Vanorwra Kodzero dzeVanhu Voshushikana neKukanzurwa kweMusangano weSADC Troika kuMozambique
Vanorwira kodzero dzevanhu vanoti vari kushushikana zvikuru nekukanzurwa kwakaitwa musangano wechimbi chimbi wevatungamiri venyika dziri mu SADC Troika, uyo waifanirwa kuitwa nemusi weChina, asi ukakundikana sezvo vatungamiri vaviri vari muSADC Troika, Va Mokqweetsi Masisi vekuBotswana, naVa Cyril Ramaphosa vekuSouth Africa, vakakundikana kuenda mumusangano uyu.
VaMasisi, avo vanova sachigaro weSADC Troika, vanonzi vakazvipatsanura zvichitevera kubatwa ne Covid-19 kwechipangamazano chavo, ukuwo VaRamaphosa vachinzi vakakundikana sezvo vaifanirwa kumira pamberi pekomisheni ye Zondo Commission of Inquiry.
Vatungamiri vaifanirwa kusangana mumusangano we SADC Troika wekukurukura hondo iri mu Cabo Delgado mu Mozambique, ndiVaEmmerson Mnangagwa, mutungamiri we Mozambique uye vari sachigaro weSADC, Va Filipe Nyusi, naVaRamaphosa, avo vari kutarisirwa kutora higaro chasachigaro weSADC Troika muna Nyamavhuvhu.
SADC inoti musangano uyu wakakanzurwa sezvo VaMasisi naVa Ramaphosa vakakundikana kunge vari pamusangano uyu.
Asi gweta rinorwira kodzero dzevanhu, uye vari mukuru we Human Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, VaDewa Mavhinga, vanoti chokwadi chiripo ndechekuti VaNyusi havasi kuzvipira panyaya yekuti SADC itumire mauto ayo ku Mozambique.
Mashoko aVaMavhinga atsigirwawo nezvaburitswa nebepanhau repaindaneti, re NewsHawks.
VaMavhinga vanoti zvakaitwa zvekukanzura musangano wakakosha kudai zvinosiya vanhu vemudunhu reCabo Delgado vachifunga kuti havakosheswi.
VaMavhinga vanoti SADC yaikwanisa kuitira musangano wayo padandemutande ichibuda nechisungo chakasimba chekuona kuti vanhu vemuCabo Delgado vawana rubatsiro.
Sangano reUnited Nations rinoti vanhu vanodarika mazana manomwe ezviuru vakatiza misha yavo mudunhu iri, uye vanhu vanodarika zviuru zviviri nemazana matanhatu vanonzi nesangano reArmed Conflict Location and Event Data, vafa muhondo iri kuitika muMozambique.
Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti mauto emuMozambique anonzi ari kushungurudza vanhu vari mudunhu iri vanofungidzirwa kuti vanenge vaine ruzivo rwekune vakapfurikidza mwero vari kurwisa muCabo Delgado.